ISTANBUL: Aqoon isweydaarsi lagaga doodayo sida loo maareeyo walbahaarka ka dhasha isticmaalka Internet-ka. - Somnieuws.com
Maalintii 5-aad waxaa ka soconaya magaalada Istanbul, ee dalka Turkiga aqoon-isweydaarsi loo qabtay 30-meeyo dhalinyaro ah, kana kala yimid dalalka Nederlands, Finland, Sweden, Italia, Faransiiska & Turkiga. Aqoon is-weydaarsigan oo ah kii ugu horreeyay oo noociisa ah ayaa lagaga doodayay sida loo maareeyo walbahaarka ka dhasha isticmaalka badan ee aaladaha ku shaqeeya Internet-ka.
Dooddan, waxaa si weyn loogu falanqaynayay saameynta nololeed ee u horseedayo isticmaalka badan ee taleefanka, waxaanna aragtiyo kala duwan soo bandhigay dhalinyaradii ka soo qeybgashay, oo loo sameeyey tartamo madadaalo ah.
Barnaamijkan aqoon is-weydaarsiga ah waxaa loogu talogalay inuu socda inta u dhexeysa 15-ka ilaa 24-ka bishan, waxaana casharo ka bixibayay Joequin Martin & Ekaterine. Hay’adda Jamaal Elmi Foundation oo fadhigeedu yahay Nederlands, ayaa soo qabanqaabisay aqoon is-wayraadsiga waxaana maalgeliyay Erasmus + EU .
C/shakuur Cilmi Xassan oo ah aasaasaha hay’adda, oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ay sharaf weyn u tahay Jamaal Foundation qabanqaabada aqoon isweydaarsiga, wuxuuna u mahadceliyey dhammaan hay’adihii kulankaasi kala soo qeybgalay & Erasmus + EU oo maalgelisay in barnaamijkaasi najaxo.
Cabdifitaax Jaamac [Janna-gale], oo ka mid ah hormuudka aqoon isweydaarsigan, ahna macalin waqti dheer ka soo shaqeeyay arrimaha ijticmaaciga ah ee kor loogu qaadayo wacyiga bulshada, ayaa sheegay in aqoon isweydaarsigan waxtarka ugu wayn ee uu ka qeybgalayaasha u leeyahay aaney aheyn oo keliya mowduuca laga doodayo, balse waxtarka ugu ballaarani inuu yahay in dhalinyarada ka qeybgaleysa oo ka kala yimid 6 waddan in ay fursad u helayaan in ay dhaafsadaan
C/fitaax Janna-gale, waxa isaga oo ku hadlaya magaca ka qeybgalayaasha & macalimiinta casharada bixinayay wuxuu u mahadceliyay Erasmus + EU.
“Marka ay meel isugu yimaadaan dadyow ka yimid wadamo dhaqamadoodu kala duwan yihiin, mowduuca isu keenay ka soke waxay sidoo kale kala kororsanayaan waaya-aragnimo & aqoon uu midba kan kale u gudbinayo” Ayuu yiri Janna-Gale.
C/risaaq Shiikh Adduun & C/casiis Xildhibaan oo ka mid ahaa qabanqaabiyaasha aqoon is-weydaarsiga, kaalin waynna ku lahaa habsami u socodka & faya-dhowrka dhalinyarada kulankaasi ka soo qaybgashay ayaa sheegay in isu-imaatinimada noocan ahi ay dhiig cusub gelineyso fikirka ku saabsan in dhalinyaradu lagaga digo isticmaalka badan ee Internet-ka, si aaney ugu habsaamin howlo kale oo noloshooda muhiim u ah, waxbarashadu na ka mid tahay.
“Dadka ugu badan ee aqoon isweydaarsigan ka qeybgalaya waa dhalinyaro Soomaali ah, waxa ugu yar ee ay kala kororsan karaani waxay tahay in halkan isku barteen dhalinyaro tiradaasi la’eg” Ayuu yiri C/risaaq Shiikh Adduun.
Aqoon isweydaarsigan ayaa ku eg maalinta Axadda ah ee ay taariikhdu ku beegan tahay 24-ka bisha.